Tsy nihambahamba nitifitra ireo jiolahy: olona roa maty voatifitra teo amin’ny kibony sy ny lohany | NewsMada
Tsy nihambahamba nitifitra ireo jiolahy: olona roa maty voatifitra teo amin’ny kibony sy ny lohany
Olona roa indray voatifitry ny jiolahy tany Mahajanga. Maty tsy tra-drano ny iray tamin’ireo. Nanafika tsena ireto olon-dratsy nirongo basy nahavanon-doza.
Nirefodrefotra ny basy tany amin’ny fokontany Ambalavola Mahajanga, ny alin’ny zoma 24 aogositra teo, tokony ho tamin’ny 8 ora alina. Mpivarotra enta-madinika iray, notafihin’ny jiolahy nitondra basy tany an-toerana. Voalaza fa niditra an-keriny tao an-tsena ny roa lahy miaraka amin’ny basy ary nanery ny tompontrano hamoaka ny vola rehetra.
Nahare kotaba ny zanany lahy tany amin’ny efitra ambadika ka nijery ny zava-nisy. Kanjo tifitra no nitsena azy ka nahavoa ny masony sy ny tanany. Voatifitra teo amin’ny kibony ihany koa ny lehilahy iray teo an-toerana izay fantatra fa naman’ny mpiambina ny tsena. Tsy tana ny ain’ity farany raha vao tonga teny amin’ny hopitaly. Ireo jiolahy kosa raha vao nahazo ny zavatra nilainy, lasa nitsoaka avy hatrany. Vola 7 hetsy Ar eo no lasan’ireo olon-dratsy.
Marihina fa tapaka ny jiro tany Ambalavola Mahajanga, nandritra ny fotoana nanaovan’ireo jiolahy ny asa ratsiny. Fotoana fohy taorian’ny fanafihana, efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana, saingy tsy nisy tratra ireo olon-dratsy fa tafaporitsaka avokoa.
Tapaka jiro matetika
Araka ny fanamarihan’ny olona any an-toerana, tapatapaka ny jiro tany Mahajanga tao anatin’ny herinandro izay. Io no araraotin’ny jiolahy. Anisan’ny toerana be olona any amin’iny faritra iny, amin’izao fotoana izao ka mahasarika ny olon-dratsy. Tsy fantatra intsony izay jiolahy sy ny olon-tsotra mifanaretsaka. Manao ny fisafoana amin’ny alina ihany ny mpitandro filaminana, saingy tsy sendra ireo mpanao ratsy. Mbola tsy tapitra ny fotoam-pialantsasatra any an-toerana sy ny fahamaroan’ny olona, manao izay ho afany ny mpitandro filaminana hisorohana izay mety hiitaran’izany, indrindra amin’ireo mpiala sasatra any Mahajanga.